I-Cabanatuan Studio 201-I-WiFi esheshayo Yamahhala
I-inthanethi ye-wifi esheshayo yamahhala nokuhamba imizuzu eyi-10 ukuya e-SM Mall Cabanatuan. Indawo ephakathi nothelawayeka elula... eduze neMalls, Izibhedlela, Ihholo Ledolobha, Ihholo Lezobulungiswa kanye Nezindawo zokudlela. Indawo yokupaka egalaji yamahhala ngaphansi kwekhava.
Isitudiyo esihlanzekile esilula esakhiweni esiphephile somndeni, amamitha angu-30 nje ukusuka kuthelawayeka we-National Maharlika. Indawo yami ilungele izithandani, abantu abazihambela bodwa, abahambi bebhizinisi nabalala ebusuku. I-Central Luzon, inhle kakhulu ngendawo yokuhlala yamaphakathi nohambo. I-TV, i-aircon, ifriji kanye nekhishi eligcwele indawo.
Isitudiyo esilula esihlanzekile esine-airconditioned esinethezekile esizoqashwa esitezi sesibili salesi sakhiwo esivikelekile sesitayela se-condominium esinomnyango ongenasango. Kuphephile futhi kuvikelekile njengoba iphansi lihlala ubaba. I-balcony enkulu yophahla lwesitezi sesi-4 inikeza umbono we-Cabanatuan nezintaba ezisempumalanga.
4.72(47 okushiwo abanye)
4.72 · 47 okushiwo abanye
Indawo ye-barangay ematasa nephithizelayo nje engamamitha angama-30 ukusuka kuthelawayeka kazwelonke futhi ngaphansi kwekhilomitha ukuya e-SM mall...okuyindawo yesibili ngobukhulu ngaphandle kwase-Manila. Indawo inezitolo ezikhona eziseduze kanye nezitolo zokudla ezisanda kuphekwa ezitholakalayo.
Ubaba wami osewathatha umhlalaphansi uyena ophethe indawo futhi uhlala esitezi esiphansi. Enobungane futhi ewusizo anganikeza iseluleko lapho sidingeka.